Foko sy Fiaviana · Mey, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Mey, 2012
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Mey, 2012
Amerika Latina 28 Mey 2012
Però: Ny fomba niarovan'ny Achuar ny taniny tamin'ireo orinasa mpitrandraka solitany
Amerika Latina 24 Mey 2012
Ilay sarimihetsika Chumpi & The Waterfall (Chimpi sy ilay riandrano) no mitantara ny fiainan'i Chumpi kely sy ny fiarahamonina nisy azy, ny Achuar izay mponina mipetraka ao amin'ny alan'ny Amazonina eo amin'ny sisintany mampisaraka an'i Pero sy Ekoatera. Aseho ao amin'ilay sarimihetsika, nadika an-tsoratra amin'ny teny anglisy, ny harena ananan'ny...
Lahatsary: Fahafahana Manangana Mandritra Ny Fanazarana Manao Media Ao Amin'ny Rising Voices
Myanmar (Birmania) 23 Mey 2012
Nanatontosa ny atrikasa fandraisam-peo ny tetikasa Karen Border News eo amin'ny sisintany manelanelana an'i Myanmar sy i Thailandy, vatsian'ny Rising Voices.
Martinika: Sarimihetsika “Think Like A Man”, Afa-tsy Ao Frantsa Ihany
Karaiba 14 Mey 2012
Fanavaozam-baovao: 23 Mey 2012, 9:20 pm Takatray ny filazana avy ao amin'ny vohikala Allo Ciné cinema fa “hivoaka tsy ho ela” araka ny efa voasoratra elaela ihany ny sarimihetsika “Think Like a Man” . Miala tsiny ho an'ny mpampiely ny sarimihetsika, araka ny fanambarana ato, milaza fa tsy nisy mihitsy fikasana famoahana...
Eoropa : Tsianjery Maimbo Momba Ny Fifindra-monina
Afrika Mainty 11 Mey 2012
Nifarana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena frantsay saingy ny nifidianan'ny filoha teo aloha, Nicolas Sarkozy, hanao ny resaka fifindra-monina ho ivon'ny fampielezan-keviny kosa dia mitohy resahana hatrany ety anivon'ny tranonkala. Manotany teny ny maro amin'ny mpiondana aterineto raha toa io safidy nanaovany pi-maso tamin'ny hery farany havanana mba ho fampandaniana azy io ka nanampy mba hanamaivamaivana ny fahareseny, na mifanohitra amin'izany, anisan'ny antony iray nampandositra ireo mpifidy azy.
Lahatsary: Mifampizara Ny Fiainany Ny Reny Manerantany
Afrika Mainty 03 Mey 2012
Hita ao amin'ny fampirantiana an'aterineton'ny Mozea iraisampirenena Momba ny vehivavy avokoa ny momba ny reny rehetra. Nampahafantatra ireo karaza-pijery momba ny reny tamin'ny alalan'ny fanadihadiana an-dahatsary natao tamin'ny vehivavy avy ao Nizeria, Kenia, Afganistana, Etazonia, Kolombia, Hongria, Shina ary Norvezy ny MAMA: Ny Fiainan'ny reny manerana ny glaoby. Mama to Be (Ho reny atsy...